pvmuqdisho – Puntland Voice
Ciidamada Dowlada oo qaabtay Gaari ay Wateen Dableey Dilal ka Geeystay Muqdisho
Ciidamada Nabadsugida Dowlada Soomaaliya ayaa Magaalada Muqdisho ku qabtay gaari loo yaqaano Noaha oo Dableey wateen ay dad ku rasaaseeyeen Muqdisho. Ciidamada NISA ayaa gaarigaan waxa ay ku qabteen Xaafada Jamhuuriyah Degmada Kaaraan ee Magaalada Muqdisho. sidoo kale ciidamada ayaa […]
Weeraro lagu dilay Masuuliyiin iyo dad rayid ah oo ka dhacay Muqdisho
Waxaa Magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya dhacay maanta ilaa 5 dil oo loo geeystay Dad kala duwan. Dilkii ugu horeeyay ayaa waxaa uu ka dhacay Degmada waabari ee Gobolka Banaadir halkaasi oo dableey hubeeysan ay ku dileen qof rayid ah. Sidoo […]
Gudoomiyihii Gobolka Sool ee Puntland oo shil Gaari ku Geeriyooday
Allaha u naxariistee waxaa Goordhow inta u dhaxeeysa Laascaanood iyo Garoowe shil ugu geeriyooday Gudoomiyihii Gobolka sool ee Dowlada Puntland. Allaha u naxariistee Muqtaar Mahad ayaa Gaarigii uu watay Shil ku Galay sidaasina ugu geeriyooday Gudoomiyihii Gobolka Sool ee Dowlada […]
Madaxweyne Farmaajo oo safarkiisii ugu horeeyay ugu amba baxay dalka Dibadiisa
Warar lagu kalsoonaan karo oo aan heleyno ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo uu safar dhanka dibada ah uu u amba bixi doono. Madaxweyne Farmaajo ayaa safarkiisii ugu horeeyay ku tagaya dalka sucuudiga […]
Guddoomiyihii hore ee Maxkamadda Sare ee Dalka Caydiid Cabdullaahi Ilka Xanaf oo la hadlay Warbaahinta Magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay doorashadii dhawaan ka dhacday magaalada Muqdisho ee lagu doortay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ilka Xanaf ayaa sheegay in doorashada dhacday […]
Madaxweynaha Hir Shabelle oo Magacaabaya Golihiisa Wasiirada
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali C/laahi Osoble ayaa wada qaban-qaabadii ugu dambeysay uu kusoo magacaabayo Golihiisa wasiirada Maamulkaas. Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle ayaa la sheegay in uu diyaariyay kala bar xubnaha Golaha wasiirada Maamulkaas, islamarkaana laga soo xulay Gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha […]
DEG DEG: Tiro Madaafiic ah oo lagu weeraray Xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya ee Muqdisho
Xili maanta magaalada Muqdisho uu si rasmi ah u la wareegay xilka Madaxweynaha Soomaaliya islamarkaasina Munaasabad ay ka dhacday Xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya Munaasabad Balaaran. Xili ay Munaasabadaasi ay soo dhamaatay ayaa mar qura ah waxaa la maqlay Maqalka hoobiyaal […]
SAWIRO: Madaxweyne Farmaajo oo la Wareegay Madaxtooyada Villa Soomaaliya
Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo Madaxweynaha cusub ee Somaliya ayaa waxa uu maanta si rasmi ah ula wareegay Xafiiska shaqada ee Villa Somaliya,. Munaasabadaan oo aheyd mid si heersare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ay ka dhacday Xarunta Madaxtooyada Villa […]
Madaxweyne Farmaajo iyo Boqorka Sucuudiga oo ka wada hadlay Xaalada wadanka Soomaaliya
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Madaxweynaha soomaaliya ayaa marki ugu horeysay khadka telefoonka kula hadlay Boqorka Sucuudi Carabiya Boqor Salmaan Bin Cabdicasiis Aala Sucuud, Boqorka ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee soomaaliya waxana uu tilmaamay in doorasho xor ah ay ka […]
Nabadoon Wax kasoo Dhisay Xildhibaanada Baarlamaanka oo Muqdisho lagu Dilay
Wararka naga soo gaaraya Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir ayaa ku waramaya in salaadii maqrib ee xalay kadib gudaha degmadaas lagu dilay mid kamid ahaa Nabadoonada Soomaliyeed. Ala Ha u Naxariistee Nabadoon Muuse Ilka-weyne oo kamid ahaa Nabadoonada Soomaliyeed ayaa […]